Qoraallada moobaylka oo xoog ku imanaya! | Martech Zone
Saturday, May 3, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
fiilo dhawaan waxay sameysay codbixin dadka isticmaala Telefoonka gacanta waxayna ogaadeen in 64% dadka isticmaala mobilada aysan isticmaalin fariimaha qoraalka. Markii aan baarayay qoraalkan, waxaan la yaabay in dhowr goobood ay ahaayeen yaabay by ay lambarada.
Waxaa laga yaabaa inaan ahay isticmaale ka da 'weyn qaar ka mid ah dadka wax qora ee wax faaleeya, laakiin runtii waan la yaabay sababta ka soo horjeedda. Waxaan la yaabay in 65% adeegsadayaashu runti sameeyey isticmaal farriinta qoraalka. Waxaa laga yaabaa inay tahay wax fudud inaan 40 sano jirsaday laakiin… runti? Taasi waxay lamid tahay inaad ka nixisay in 35% dadka taleefanka isticmaala aysan waligood isticmaalin mashiinka telefishanka.
Boqolkiiba 35 dadka isticmaala taleefanka gacanta uma diraan qoraal sababtoo ah waxay ogaadeen inay runti awoodaan hadal sanduuqaas yar ee gacanta ku jira ee waqtiga dhabta ah la socda qofka dhinaca kale. Mana aha inay suulasha suulasha sidaas yeelaan. Dabcan, farriinta qoraalka waxtar ayey ku imaan kartaa haddii aad rabto inaad qof kala tagto laakiin aadan rabin inaad dhab ahaan la hadasho.
Dabcan waan caayayaa, waxaan jeclahay inaan qoro. Carruurteydu waxay fariin qoraal ah ugu diraan asxaabtooda si aan dhammaad lahayn waana ku faraxsanahay markay fariin iigu soo diraan kulan halkii ay i soo wici lahaayeen. Qoraalku aad ayuu uga yaryahay faragalinta waana arrin deg deg ah. Waana soo kordheysaa.
Ganacsiyadu waxay la dhibtoonayeen waxa lagu sameeyo moobilka in muddo ah hadda. Buuq ka dhex jira warshadaha adeegga cuntada ayaa ah sida macaamiisha jawaabta leh ay ugu jiraan rasiidhada qoraalka ku saleysan iyo digniinta. Waxaan la kulmay Adam Small, Madaxweynaha Qoraalka Codsiga, Subaxaan iyo Aadam wuxuu ku cabiray gabayga waxyaalaha aadka u xiisaha badan ee ka soo degaya dhuunta.
Qoraalka Codsiga wuxuu horeyba u leeyahay xoogaa isticmaalka taleefanka gacanta ah. Mid ka mid ah ayaa siinaya dadka isticmaala Marathon dhammaadka wakhtiga iyaga oo qoraal ugu qora lambarka diiwaangelintooda. Looma baahna in la sugo ilaa aad guriga ka gaadhayso si aad PC-gaaga waqtiga uga fiiriso!
Adam wuxuu sii waday sharaxaadda SMS iyo MMS. Halkee SMS (Adeegga Farriinta Gaaban) wuxuu u oggolaanayaa 160 xaraf oo qoraal ah in dib iyo gadaal loo diro, MMS (Adeegga Fariimaha Multimedia) wuxuu oggol yahay in sawirrada, fiidiyowga iyo codka dib iyo gadaalba loo diro.
Maaddaama bixiyeyaasha moobiilku ay sii wadaan inay xoojiyaan shabakaddooda xawaare (tusaale 3g, tarjumay = jiilka saddexaad) iyo taleefannada gacanta waxay sii wadaan inay sare u qaadaan shaashadooda iyagoo leh qaraarro sare, tani runti way furi kartaa suuqa!
Halkii aad farriin qoraal ah ugu diri lahayd riix kaluunka qadada, waxaa laga yaabaa inaad fiidiyo yar ka soo diri karto maamulaha heeganka ku jira ama fiidiyow weyn oo saxanka laftiisa ah! Waxaad sidoo kale gudbin kartaa kuuboon la adeegsaday iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada ugu dambeeya si tafaariiqle uu si fudud ugu ruxruxo akhristaha taleefanka hortiisa si uu ugu iibsado kuubanka.
Adam wuxuu ila wadaagay teknoolojiyad dheeri ah oo xiiso leh oo aanan ogolaansho u haysan inaan halkan ku wadaago (weli), laakiin waxaan rajeynayaa inaan arko oo isticmaalo.
Qoraalku ma inuu Bilaashbaa?
Waxaan weydiiyey Adam haddii uu u maleynayo in sicir-bararku u beddeli doono farriinta halkan ka socota Mareykanka (farriimaha dibadda inta badan waa bilaash) wuxuuna igu yiri ma rajeynayo. Hal fiiri mugga spam ee ku jira sanduuqaaga ayaa sharraxaysa sababta… haddii farriinta qoraalka aysan lacag ku kacayn, taleefannadeennu way buuxsamayaan inta aan hadlayno!
Tags: marketing mobilesms mobileSMSsms suuq geyntafarriinta qoraalka suuqgeyntaqorista
Hagaag, haa, inkasta oo aan ka mid ahay dadkan da'da ah ee sida dhabta ah u duqoobay oo aanan u isticmaalin moobiil qoraal mooyee - waxay ku anfacaysaa edeb darro aan uga baahnayn qofka qaata inuu shaqada joojiyo oo uu dhageysto, markaan ogahay inaysan ahayn u dhow qalab emayl…
Haddii shirkaddaadu diiradda saarto waxyaabaha ku jira mobilada ama IM-ga, waxaad u baahan lahayd sahankaaga inuu ka tarjumayo adeegsiga hoose ee farriinta qoraalka. laakiin tirooyinkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay CTIA, oo ah hay'ad caalami ah oo aan u janjeerin ayaa muujineysa in 262 milyan oo milkiilayaasha taleefannada Mareykanka ah, in ka badan 176-milyan oo fariin qoraal ah. In kabadan 400,000 daqiiqad kaliya Mareykanka.
Farriimaha qoraalka ee Mareykanka ayaa ku koraya heerka 151% sanadkiiba, iyadoo 30 illaa 45 sano jirku korayo heerka 130%.
Kaliya 3 ka mid ah bixiyeyaasha waaweyn ee Mareykanka ayaa hadda u oggolaanaya MMS badankoodna inta badan ciyaartoy waaweyn waxay diiradda saarayaan ballaarinta suuqgooda marin u helista xogta sababtoo ah caqabadaha ka jira bixinta MMS, taas oo ka yar 30%.
Macluumaadka laga helo moobiilka ayaa ah mustaqbalka suuq geynta moobiilka, laakiin SMS loogu talagalay isgaarsiinta saafiga ah iyo tirada codsiyada laga heli karo qoraalka ayaa sii kordhaya.
Waqtigaan ku dhowaad 50% taleefannada Mareykanka waxay leeyihiin awood xog laakiin kaliya qiyaastii 30% ayaa bixiya khidmadaha dheeraadka ah si loo kiciyo muuqaalka.
Tirooyin waaweyn, Rbowen! Aad baad ugu mahadsantahay waqtiga aad siisay inaad wadaagto tirakoobyadan. Waxaan baaray shabaqa si aan u ogaado waxa aan kaga ogaan karo mowduuca. Farriinta ayaa hubaal leh buzz, laakiin wali waxay umuuqataa inay leedahay wadooyin loo maro helitaanka korsashada suuq geynta guud. Malaha kani waa sanadkii!